Otú nyefee Ndi ana-akpo si Nokia ka Android ekwentị mkpanaaka na
Otú nyefee Photos, SMS, Music, Video & Ndi ana-akpo si Nokia ka Android
E nweghị ihe ọ njọ karịa ọ enwetatụbeghị a ohuru ekwentị naanị na-ahụ na i nwere ike adịghị nyefee kọntaktị site ochie Nokia ọhụrụ gị Android ekwentị. Enweghị kọntaktị, ị nwere ike ghara ime ka ekwentị oku ma ọ bụ zipu ozi ederede na niile. N'ezie, ị na-adịghị mkpa nsogbu mgbe nile. Ọ bụ ezie na emepụta maka dị iche iche igwe mgbe na-enye ihe ọ bụla nhọrọ ka ịnyefe ọdịnaya site na otu n'elu ikpo okwu ọzọ, a ka nwere ọtụtụ ọrụ gburugburu. Isiokwu a ga-ịme ka ị otu nke kasị mma ngwá ọrụ - Wondershare MobileTrans, nyefee photos, ederede ozi, music, videos, kọntaktị, na ndị ọzọ si Nokia ka Android igwe.
Nyefee data si Nokia ka Android, mfe na rụọ ọrụ nke ọma!
Nyefee na kọntaktị site Nokia ka Android na zuru na Ama kọntaktị
Nyefee ozi site Nokia ka Android na-agaghị echefu echefu mkparịta ụka
Copy music, foto na vidiyo si Nokia ka Android na-enwe na ọ laa
Ofụri Esịt akwado Nokia Symbian 40 & 60, Windows 8 / 8.1 na Android 2.1 na n'elu.
Nzọụkwụ na Jiri Wondershare MobileTrans ka ịnyefe ọdịnaya site Nokia ka Android
Dị ka m na e kwuru n'elu na Wondershare MobileTrans bụ ike nyefee kọntaktị, ozi, videos, foto, na ọdịyo faịlụ site Nokia ka Android ntị na mbadamba (Lee ihe na-akwado nyiwe na faịlụ na ụdị ebe a). Nzọụkwụ idetuo ndị a faịlụ site Nokia ka Android bụ otu. N'okpuru ebe m ga-kpọmkwem na-agwa otú nyefee kọntaktị site Nokia ka Android ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị na-adịghị mkpa idetuo ọdịnaya niile si Nokia ka Android, na-nche nke gị data echiche, biko jiri ndabere atụmatụ maka MobileTrans ka ndabere data na gị Nokia ngwaọrụ.
Nke mbụ niile, download na wụnye Wondershare MobileTrans na kọmputa gị. Mgbe ahụ ị ga-ahụ bụ isi window below.Connect gị Nokia na Android ekwentị na kọmputa na USB Gịnị, ma jide n'aka na ha nwere ike ịga nke ọma achọpụtara site na kọmputa gị. Nanị na nke a na-arụ ọrụ, otú ihe omume ahụ na-aghọta gị na ngwaọrụ. Ahụ na-aga ka nzọụkwụ ọzọ.
Nzọụkwụ 2. Họrọ ọdịnaya na gị Nokia ka Android
Mgbe gị na ngwaọrụ jikọọ ọma, pịa "na ekwentị ekwentị Nyefee" na isi window. Mgbe ahụ ị na-nanị otu pịa pụọ nyefee gị Nokia ka Android. Ịhọrọ data na gị Nokia na ị chọrọ trasnfer gị Android site n'inyocha igbe n'ihu nke faịlụ na ụdị. Ma jide n'aka na ekwentị Nokia gị achọpụtara dị ka isi iyi na omume na Android bụ ebe. Ị nwere ike iji "tụgharịa" button ka ịgbanwee ha ebe.
Ọ bụrụ na ị nwere Nokia ekwentị dabeere na Windows usoro, Wondershare Mobiletrans pụrụ inyere gị aka nyefee Photos, videos, Music faịlụ ozugbo. N'ihi na Ndi ana-akpo, biko kwado ha ruo OneDrive mbụ, wee pịa Weghachi si ndabere na Mobiletrans iji weghachi kwadoo kọntaktị na Android ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 3. One click nyefee niile na Nokia ka Android
Ozugbo ihe niile dị njikere, pịa "Malite Copy" n'okpuru faịlụ ụdị na-echere ruo mgbe usoro zuru ezu. Mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịhụ niile kpọfere data si Nokia na gị Android.
Ọzọ zuru ezu Isiokwu maka ebufe ọdịnaya site Nokia ọzọ igwe
Eduzi ka Nyefee Ndi ana-akpo si Nokia ka Nexus 5
Olee otú Bugharịa Ndi ana-akpo si Nokia ka HTC
Ndabere Ndi ana-akpo, SMS, Video, Photos on Nokia
> Resource> Android> otú nyefee Ndi ana-akpo, Photos, SMS, Music na Video si Nokia ka Android